Celebrating StarCity's Achievements
#realestate #realestatedeveloper #yomaland #starcity #yomalandhomerentals #residentialprojects #myanmar #residential #cityloft
On Tuesday 11 February 2020, Yoma Land heldaTown Hall to recognize the achievements of 2019 and to share the plans for the estate. The achievements included phased completion of residential projects such as Star City and Galaxy Towers, continued sales achievements and successful negotiation of commercial lease agreements. The employees also heard about exciting plans for the estate such as the new wet market, community centre, the river park and new golf range. The projected significant increase in residential and business population over the next 12 months.
Mr. Stephen Purvis, Head of Yoma Land & Ms Tin Winn Nge, General Manager of StarCity
As Yoma Land continues to roll out City Loft and commence new projects, it is anticipated that the Estate’s residential and business population will grow from 2,000 to 3, 500 over the next 12 months. The Thanlyin Star City Town Hall was concluded with recognition of Tin Win Nge and Nathan Harrison’s leadership over the years to bring the estate to its current successful position and introduction of the new management team. The estate employees and management concluded the afternoon with fun-filled staff party which include many Yoma Land entertainers and Ester from Myanmar Idol.
သန်လျင် ကြယ်စင်မြို့တော်အိမ်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုပြန်လည် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် Town Hall အစည်းအဝေးကြီးကို Yomaland မှ ကြီးမှုးကျင်းပခဲ့ပြီး၊ Star City ၏ ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်းရရှိခဲ့သော လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုများကို အသိမှတ်ပြုပြောကြားပြီး၊ ရှေ့အနာဂတ်အစီစဉ်များကို မျှဝေပေးခဲ့ပါသည်။
Star City ၏ အောင်မြင်မှုရလာဒ်များတွင် Galaxy Tower (ဇုန်စီ)ရှိ လူနေအိမ်ခန်းများ ဆောက်လုပ်မှုများ အပြီးသတ်နိုင်ခြင်း၊ City Loft အိမ်ခန်းအရောင်းများ ဆက်လက်ရောင်းအားကောင်းခြင်းနှင့် စီးပွားဖြစ်ဆိုင်ရာ ဆိုင်ခန်း၊ ရုံးခန်းများ အငှားညှိနှိုင်းမှုသဘောတူစာချုပ်များ ချူပ်ဆိုနိုင်ခြင်းများ စသဖြင့် ပါဝင်ပါသည်။
၄င်းအပြင် အိမ်ရာဝင်းအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာမည့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အနာဂတ်စီမံကိန်းများ ဖြစ်သည့် သား၊ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဝယ်ယူနိုင်မည့် ဈေးသစ် (Wet Market)၊ လူထုအခြေပြုဖော်ဆောင်ရာ အဆောက်အအုံ (Community Center)၊ မြစ်ကမ်းဘေးပန်းခြံ (River Park)နှင့် ဂေါက်ရိုက်လေ့ကျင့်ရာ နေရာအသစ် (The Driving Range) များကိုလည်း ဝန်ထမ်းများမှလည်း ကြားသိခဲ့ရပါသည်။
Yomaland မှ ဆက်လက်ဖော်ဆောင်မည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်များအတွက် အခြားဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှု အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ City Loft အိမ်ရာစီမံကိန်းများ ဆက်လက်ဖော်ဆောင်ခြင်းကြောင့် အိမ်ရာတွင်နေထိုင်သူများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလူဦးရေများမှာ နောင် ၁၂ လကျော်လွန်သောကာလတွင် ၂၀၀၀မှ ၃၅၀၀ ကျော် သိသာထင်ရှားစွာ တိုးပွားလာမည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းမိပါသည်။
ယခုလို Star City ကြယ်စင်မြို့တော်အိမ်ရာအဖြစ် အောင်မြင်သည့်အနေအထားတစ်ခုရောက်အောင် ဦးဆောင်မှုပြုခဲ့ကြသည့် ဒေါ်တင်ဝင်းငယ်နှင့် မစ္စတာနေသန် ဟာရစ်စင် တို့၏ ခေါင်းဆောင်မှုများကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုချီးမွမ်းစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ထိပ်သီးစီမံအုပ်ချုပ်သူအဖွဲ့ဝင်အသစ်များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြင့် သန်လျင်ကြယ်စင်မြို့တော်အိမ်ရာ၏ Town Hall အစည်းအဝေးအား အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ဆက်လက်ပြီး ပျော်စရာများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည့် ၉ကြိမ်မြောက် Staff Party ကို ဝန်ထမ်းများနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်သူများဖြင့် ပျော်ရွှင်စည်ကားစွာဖြင့် ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါသည်။ Myanmar Idol Season4Winner ဖြစ်သူ အက်စ်သာနှင့် Myanmar Idol Season4Top 11 အဖွဲ့ဝင် နေလင်းကျော်တို့နှင့်အတူ Star City မှ ဝန်ထမ်းများမှ ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါသည်။